Akpụkpọ anụ mmanye nke ihu - ọgwụgwọ
Mma na ike Ngosiputa Ngwa
Ịgwọ akpụkpọ anụ nke ihu bụ usoro siri ike, nke chọrọ nkwụsi ike na ndidi. Ruo n'oge na-adịbeghị anya, enwere echiche na mgbe ọgbọ na-agakwaghị enwe nsogbu ahụ, ọ dị gị mkpa ichere oge nke oge ntorobịa. Ma okwu a abụghị eziokwu. Ọkpụkpụ mmanu na-emepụta ọtụtụ nsogbu n'oge uto, ọ dịkwarịrịrịrị ike, ma ọtụtụ nsogbu ahụ ka dị mkpa na 25 na 30, na mgbe ụfọdụ na afọ 40. Ya mere, taa ọ bụghị ihe nzuzo na iji ọgwụ mmanu anụ ahụ dị mkpa.
Ma iji chefuo nsogbu ahụ n'egbughị oge na ịnweta anụ ahụ mara mma ga-achọ ime mgbalị. Nke mbụ, site na akpụkpọ anụ nke ihu, ọgwụgwọ kwesịrị ịbụ ihe zuru ezu, iji mee ka a kwụsị ihe kpatara nsogbu na nsogbu ha.
Kedu ihe mere ihu ihu ji dị ọcha?
Nke mbụ, ụdị akpụkpọ anụ, ọ dị mwute ikwu na ọ bụ n'ihi mkpụrụ ndụ ihe nketa. Enweghị ike ịgbanwe nke a. Ma, e nwere ihe ndị na-eme ka akpụkpọ anụ ahụ dịkwuo njọ, ọ pụkwara imetụta ọrụ nke ọkpụkpụ sebaceous ọbụna n'ụdị akpụkpọ anụ ma ọ bụ nke dị nro. N'ọnọdụ ndị dị otú a, ị ga-achọpụta ozugbo ihe akpụ akpụ ihu ahụ, ebe ọ bụ na ihe kpatara ya nwere ike ịbụ ọrịa ndị dị n'ime.
Ọtụtụ mgbe, ọ bụ ihe ndị na-esonụ kpatara mmebi nke iyi egwu ahụ:
mgbanwe mgbanwe nke hormonal, mmụba nke ụbụrụ testosterone, na-emetụta ọrụ nke oghere ahụ dị iche iche;
nlekọta anụ ahụ na-ezighị ezi;
ọrịa na-emetụta ụbụrụ;
oke nri nke abuba ma ọ bụ nri a na-esi na ya, tinyere sweets na ntụ ọka;
na-aṅụ ọgwụ ndị na-emetụta ọrụ nke iyi egwu ahụ, tinyere ọgwụ ọgwụ ọjọọ;
ọrịa nke tract gastrointestinal;
arụ ọrụ imeju;
nrụgide, nsogbu ụjọ.
Sebum secretion na-eduga na clogging nke pores, nke na-emepụta ebe mara mma maka mmeputakwa nke bacteria. Ihe si na nke a pụta bụ usoro mkpali, ọdịdị nke ọkụ ojii na oji na nsogbu ndị ọzọ chọrọ ọgwụgwọ. N'ezie, site n'enyemaka nke onye mara mma, ọ ga-adị mfe karị na ngwa ngwa iji tinye ntụ ahụ. Ma ọ bụrụ na nke a agaghị ekwe omume, mgbe ahụ, a ghaghị ịgwọ ọrịa ndị mmadụ maka mmanu mmanu.
Ọgwụgwọ akpụkpọ anụ nke ihu na-agwọ ndị mmadụ
Maka ọgwụgwọ anụ akpụkpọ anụ mmanye na-acha ọcha, na-acha ọcha, na-acha anụnụ anụnụ, na-acha ọcha ọcha, calendula infusion, mkpụrụ osisi na ihe ndị na-emepụta ihe oriri na-ewere dị ka ndị kasị dị irè. Osisi ndi ozo di kwa maka iriri ohia nke ihu, mint, chamomile, horsetail, Rosemary, St. John wort, cornflower, yarrow.
Iji gbanwee ọnọdụ homonụ, ọgwụgwọ ndị dịka nchara na-acha uhie uhie, e nwere ike ịhazi ihe dị n'ime mmiri. Ma ojiji nke ahịhịa ndị a nwere ike ọ bụ naanị na enweghị mgbochi, dịka nkwekọrịta iji mee ihe. Ọgwụgwọ n'ụlọ dị iche iche.
1. Nwepụ nke mbufụt
Usoro mmebi ahụ bụ ihe na-akatọ maka ọtụtụ usoro, ebe ọ bụ na mgbasa nje bacteria nwere ike. Ya mere, nke mbụ, ọ dị mkpa iwepu mbufụt. Maka ebumnuche ndị a, ị ga-eji ndị na-agwọ antiseptik na-eme ka ndị na-aṅụ ọgwụ ọjọọ ma ọ bụ na-emeso ihe ọkụkụ nke osisi tii, tincture nke calendula ma ọ bụ eucalyptus, nke a na-adabere na salicylic acid, dịka ọmụmaatụ mmanu salicylic-zinc.
Nhicha nke akpụkpọ anụ na-achọ nlebara anya pụrụ iche. N'ututu na n'anyasị, akpụkpọ ahụ kwesịrị iji ọcha ma ọ bụ mmiri mmiri mee ka ọ dị ọcha. Mmiri dị ncha na ncha maka ụdị akpụkpọ anụ dị njọ, ebe ọ bụ na ha na-akpali ọrụ nke glands. Ugboro abụọ n'izu, ịkwesịrị ịmechasị ihu nke ọma na ihu ma ọ bụ ihe nkpuchi pụrụ iche.
Nkeji iri tupu ịsa, ọ na-atụ aro ka ehichapụ akpụkpọ ahụ na kefir ma ọ bụ ọbara, nke na-egbochi ọdịdị nke otutu.
Ihe mkpuchi ndị a na-arụkwa ọrụ:
ngwakọta nke nwa ntụ na tincture nke marigold na-etinye maka minit 15. Ihe mkpuchi a na-enyere aka ọcha;
mix a teaspoon nke mmanụ aṅụ na ọhụrụ lemon ihe ọṅụṅụ, tinye tablespoon nke anuahade oatmeal na pịa protein. A na-etinye ngwakọta nke a na ihu na ihu ma mgbe minit 15 gasịrị, a na-eji mmiri na-ehicha ya;
iji mechie etiti, na-etinye aka na akpụkpọ anụ nke ndị ọcha na-acha ọcha ọcha na otu tablespoon nke mmanya ọcha. Mgbe minit 10, a na-asacha mkpuchi mmiri oyi.
A na-enye ezigbo mmanu mmanu na ikuku oxygen na mmanụ ndị ọzọ bara uru, ya mere, mgbe a na-asachasị usoro a na-atụ aro ka ị jiri ụda igwe. Iji mee nke a, ị nwekwara ike iji ice dị mma, nke a kwadebere site na decoction nke chamomile, ma ọ bụ mint.
Nursing na weturizing masks dị mkpa iji dozie ihe omume nke mmiri iyi, melite akpụkpọ anụ, jupụta akpụkpọ na uru bara uru, na ọzọ ọcha. Maka ebumnuche ndị a, ọgwụgwọ ndị na-esonụ maka mmanu mmanu dị irè:
mix 5 tụlee ihe ọṅụṅụ mmiri lemon ọhụrụ, 10 tụlee nke camphor, ma pịa protein. Tinye maka nkeji 15 ma itucha;
mix otu teaspoon nke chamomile okooko osisi, elderberry nwa na wayo-agba. Wunye 250 ml mmiri mmiri na-esi na mmiri, wee sie maka minit 10 na mmiri ịsa mmiri. Mgbe awa 0,5 gachara, ma jikọta ya na teaspoon mmanụ aṅụ na ohia ntụ ọka, ruo mgbe a ga-etolite mkpụrụ osisi. A na-etinye ngwakọta na akwa oyi akwa, mgbe minit 20 gasịrị, a ga-asa ya na mmiri ọkụ, mgbe ahụ, ya na mmiri dị jụụ;
Iji moisturize mmanu mmanu akpụkpọ, ị nwere ike ịgbakwunye ole na ole tụlee nke pink ma ọ bụ lemon mmanụ na ụrọ ma ọ bụ akwa na-acha ọcha masks.
Atụmatụ cosmetologists nwe mmanu mmanu akpụkpọ
Mgbe a na-emeso gị n'ụlọ, ahapụla ndụmọdụ ndị na-esonụ nke cosmetologists:
ọ bụrụ na a na-ahụ usoro mmebi ahụ ruo ogologo oge na akpụkpọ anụ ahụ, a ga-enyocha onye na-ahụ maka ọgwụ ahụ, ebe ọ bụ na ntinye akụrụngwa nwere ike ịbụ ihe kpatara ya, nke ọtụtụ usoro maka nlekọta anụ ahụ na-emegide;
ọ dịghị ihe ọ bụla nwere ike ime ka akpụkpọ ahụ ghara ikpuchi ya, na-atụ anya ịbelata abụba ya. Mmetụta ya ga-abụ ihe dị iche. A na-etinyekarị akpụkpọ anụ ahụ na ndị na-eme ka mmiri na-eme ka ndị na-eme ka mmiri ghara ịdị na-ekpo ọkụ ma na-ekpo ọkụ. N'ọtụtụ ọnọdụ, a na-atụ aro ụzọ dị iche iche - nri na-edozi ahụ na moisturizing nke akpụkpọ anụ, nke na-eduga na ọnụ ọgụgụ na-emepụta sebum;
n'enweghị nlekọta kwesịrị ekwesị, ọgwụgwọ ga-enwe mmetụta dị mkpirikpi. Ma ị gaghị enwe ike ịkwụsị ya, ma burufee akpụkpọ ahụ na usoro;
Maka ịsa, gbazee ma ọ bụ mmiri dị ọcha.
Ilekọta akpụkpọ anụ nke ihu na ọgwụgwọ ndị mmadụ, ma ọ bụ nkwadebe nke elu mma, ga-ezere ọtụtụ nsogbu. Na mgbe ahụ, na-enyo na enyo, ọ na-anọgide na-enwe obi ụtọ na ọrụ nke ọrụ ya.
Ịgba maka ntutu isi
Anya Onyunyo Anya
Redstick red maka brunettes na anya aja
Akpụkpọ anụ Swarthy
Kedu otu esi adata akụ n'ụzọ ziri ezi?
Carbon ntụ ntụ: nsusu ọnụ nke anyanwụ
Melissa Mkpa Mkpa
Mmasị ihu mgbe afọ 40 gasịrị
Ngosiputa Ngwa nke klas
Uwe na ejiji Roman
Izu iri abụọ na isii - nke a bụ ọnwa ole?
Plasta ogbugbo biiti maka facade
Inna Volovichova nri site na ụbọchị
Nnukwu pancreatitis - mgbaàmà na ọgwụgwọ
Volumetric nke a na-eyi akwa - na ihe ị ga-eyi na otu esi emepụta ihe oyiyi?
Ịgwọ ọrịa lymph n'ụlọ
Utu porridge - echiche nke mbu maka isi nri a
Nchekwa volta maka TV
Onyinye maka nwoke di elu
Kedu ka esi anwụ Cersei Lannister: Lena Hidi na-aga n'ihu na-agba ndị fan
Nri elk - ọma na ihe ọjọọ
Ezi Uwe Akwa Agbamakwụkwọ 2014
Cholesterol - bụ ụkpụrụ ụmụ nwanyị mgbe afọ 50 gasịrị
Igwe ọkụ infrared - Uru na nkwonkwo
Enam na ngwa - olee ihe dị iche?
Tracheitis - Mgbaàmà
Kedu ihe nrọ nrọ banyere?
Mmanụ Pumpkin - Njirimara Ndị Dị Mma
Ejiji edozi mara mma na-eme ka ọkpụkpụ